युगसम्बाद साप्ताहिक - पाँच हजार वर्षअघिको समाजवाद - यादब देवकोटा
Saturday, 04.04.2020, 08:37am (GMT+5.5) Home Contact
पाँच हजार वर्षअघिको समाजवाद - यादब देवकोटा
नेपालको संविधानले समाजवादको परिकल्पना गरेको छ । त्यो समाजवाद जहाँ धनी–गरीबको खाडल नरहोस्, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी र सरसफाई जस्ता आधारभूत कुराहरु जनताले सहजै पाउन् । रोजगारी प्राप्त होस् र जीवन सहज होस् । यो समाजवादको सिद्धान्त वा परिकल्पना हो । तर, यथार्थ फरक छ । नेपालको समाजवाद नारामुखी मात्र छ । हामीले समाजवाद वा समानताको शास्त्रीय परिभाषालाई आत्मसात गर्नैसकेनौं । अहिले समाजवाद वा साम्यवादका गगनभेदी नारा घन्काएर माक्र्स–लेनिनको पूजा गर्नेहरुले भागवतको एउटा सन्दर्भ मात्रै स्मरण गर्ने हो भने हाम्रो समाजमा समाजवाद कहिलेदेखि थियो भन्ने प्रष्ट हुन्छ ।
आज नेपाल गरीबीचको चक्रमा पिसिएको छ । गरिबीको अथाह समुद्रमा पिल्सिएका जनताको जीवनस्तर उकास्ने नाममा धनी झन धनी हुने क्रम चलिरहेको छ । गरीब झन् भास्सिदै जाने, धनी झन उस्सिदै जाने प्रवृत्तिलाई श्रीभदभागवतमा यस्तालाई दण्डनीय अपराधी भनिएको छ । त्यहाँ भनिएको छ– “यावतभ्रियेत जठरं तावत सत्वंहि देहिनाम । अधिंक यो भिमन्यतेसंस्तोनो दण्डमर्हति ।।” अर्थात् “भरिन्छ जतिले पेट त्यति मानिसको हक । बढी ओहट्ने हो चोर सजाय गर्नु पर्दछ” । (साभार)
केही दशक अघिसम्म अध्यात्मको उन्नत थलोको रुपमा रहेको नेपाल अहिले अनेक हमलाबाट आक्रान्त छ । अहिले अध्यात्मवाद कि भौतिकवाद भनेर द्वन्द्व चर्किएको छ । समाजवाद कि पूँजीवादको बहस छ । अध्यात्म नै समाजवाद हो भन्ने चाहिं भुलेका छौं । पश्चिमा संस्कृति भित्र्याएर त्यसैको अन्धानुसरण गरेर समावादको बखान गरिरहेका छौं । यसैको प्रतिक्रिया हो– पश्चिमाहरूको संगठित हमला हुँदा आध्यात्मिक जगतमा कम्पन मात्र नभै यसको जग नै भत्कने गरी हल्लिन थालेको छ । स्थापित मान्यता र मूल्यहरूको अवमूल्यन, विश्वासको संकट, परस्परको लटारो चटारो र कालचक्रको तीब्रगतिले परम्परागत सवै सन्दर्भ चुँडिदै जान थालेको छ ।
गीता, रामायण वा वेद अहिलेकै भाषामा भन्ने हो भने कति वैज्ञानिक छ भन्ने केही सामान्य सन्दर्भबाटै प्रमाणित हुन्छ । रामायणकालीन युग १५ हजार वर्षअघिको मानिन्छ । त्यही युगमा विमानको कल्पना गरिएको थियो । रावणको पुष्पकविमान चढेर श्रीराम लंका विजय पश्चात अयोध्या फर्किएका थिए । के शास्त्रले विमानको कल्पना गरेको त्यो युग हामी स्मरण गर्न सक्दैनौं ? महाभारतको युद्धमा पृथ्वी ध्वस्त हुने अस्त्रको चर्चा छ ? अर्जुन र अस्वास्थामाको युद्धमा ब्रम्हास्त्र प्रहार हुँदा श्रीकृष्णले रोकेको सन्दर्भ छ । यदि दुई ब्रह्मास्त्र आपसमा ठक्कर आए पृथ्वी ध्वस्त हुन्छ भन्ने श्रीकृष्णको उद्गार अहिलेको आणविक हतियार हो कि हैन ? यो बुझ्नसके हामी कति उन्नत समाजका उत्कृष्ट समाजवादी मानव भन्ने तथ्य स्पष्ट हुन्छ ।
प्राचीन महर्षि, देवर्षि, राजर्षि वा ब्रह्मर्षिका चिन्तन वा स्थापित मान्यता, जीवनदर्शन र शिक्षा उपेक्षित मात्र नभएर विस्मृतिको गर्तमा पुरिएको छ अनि माक्र्स–लेनिन–माओहरू बनेका छन् आराध्य । यसैलाई आधुनिक प्रगतिशीलताको नाममा वैज्ञानिक शब्दको प्रयोग गर्दै उपभोक्तावादको जडौरी भिरिएको छ । अर्कातिर पूँजीवादी उपभोक्तावाद पनि संगठित भएर अध्यात्मलाई हमला गर्दैछ । अब धर्म केवल उपयोगितावादको रुपमा साधन मात्र बन्न गएको छ । यसको सबभन्दा ठूलो उदाहरण हो श्रीमदभागवत ज्ञान महायज्ञ– जसलाई पैसा कमाउने मेसोका रुपमा उपयोग गरिएको छ ।
नाम ज्ञान महायज्ञको दिइए पनि यो सबै पैसा कमाउने मेसो भएको छ । विभिन्न समाजिक कार्यका लागि यसैको माध्यमबाट अर्थ संकलन हुन्छ । यो सकारात्मक कुरा त हो तर यससंगै ज्ञान वितरण गर्न सकिए यसको व्यापकता अरु झल्किन्थ्यो । तर हामी ज्ञानको पछि हैन धनको पछि लागेका छौं– जुनसुकै नाममा ! अनि वैदिक धर्म–संस्कृति र संस्कृत शास्त्रलाई समाज विकासको अबरोधक मान्नेहरु तिनै महायज्ञमा दुबोको मालामा बेहुला जस्तै सजिएर उद्घाटन गर्न पुग्छन् । आत्माले नमाने पनि ‘निर्देशक’को भनाई मान्नैपर्ने बाध्यता उनीहरुलाई छ ।
धर्मसापेक्ष राष्ट्रको घोषणा नेपाली जनताको चाहना र माग थियो कि थिएन अहिले बहस गर्नु नै बेकार हुन्छ । अनि संस्कृति शिक्षा, भागवतगीता, रामायण जस्ता ग्रन्थहरु अध्ययन–अध्यापन र यसको गर्भमा रहेको ज्ञानको त्यो मुहान जनजनको मस्तिष्कमा पु¥याउनु आवश्यक छ कि छैन, यो पनि बेग्लै सन्दर्भ हो । तापनि यति चाहिं भन्नैपर्छ कि हामी आधुनिकताको नाममा विदेशीले भिराइदिएको कथित वैज्ञानिकताको जडौरी भिरेर बुर्कुसी भने मारिरहेका छौं आफैंलाई बिर्सेर !
पूर्वीय दर्शन ईशापूर्वको दर्शन हो । पाश्चात्य दर्शन ईशा पश्चात्को दर्शन हो । पूर्वले ईशापूर्व बुझाएजस्तै पश्चिमभन्दा ईशापश्चात् भनेर बुझिन्छ । अध्यात्मका गुढतम् रहस्यका गहिराईसम्म पुग्ने क्षमता नभएकाहरू सस्तो लोकप्रियताको निमित्त नारा लगाउनमै व्यस्त भएर सपना मात्र बाँड्ने र समाज भाड्ने काममा मात्र उद्यत छन् अहिले । पश्चिमका विद्वानहरूले चपाएर छोक्रा बनाएका सारहीन तर्कलाई अत्याधुनिक मानेर त्यही छोक्रा चुस्न रमाउनेहरुका कारण हामी आफ्नोपन बिर्सदै छौं । आज पूर्वीय दर्शन पश्चिमाका लागि आकर्षणको केन्द्र बन्दैछ, उनीहरु हाम्रा वेद–पुराणको अध्ययन–अध्यापन गराइरहेका छन्, तर हामीलाई भने उनीहरुको संस्कृति र धर्म लाद्न स्वतन्त्रताको नाममा रकम खन्याइरहेका छन् । हामी त्यसैको पछि दगुरेर ‘कुहिरोको माग’ बनिरहेका छौं ।